ONIVERSITE MAHAJANGA : Lany ho filoha ny Profesora Rakotoharivony Andrianony Emanuel
Salan’isa ambany indrindra 1,8% no nahalany ny profesora Rakotoarivony Andrianony Emanuel, ho filohan’ny Oniversiten’i Mahajanga. 8 janvier 2016
Vokatra vonjimaika taorian’ny fifidianana natao teo anivon’ny oniversiten’i Mahajanga, natao ny tontolo andron’ny alakamisy 7 janoary io.
Amin’ny fifidianana tahaka izao, dia izay mahazo salan’isa ambany indrindra no mandresy, araka ny fanazavana nataon’ireo tompon’andraikitra. Tsy fitambaran’ny vato azo mantsy no nitondra izany fa ny fitambaran’ny laharana azo isaky ny sampan’asa. Sampan’asa dimy araka izany no nandray anajara dia ny PAT, FSTEM (Sience), Médecine, IOSTM ary IUGM. Mpifidy voasoratra anarana 432, tonga nifidy 426. Izany hoe mpifidy 6 no tsy tonga ary tsy nisy ny vato maty sy fotsy, azo lazaina ho navitrika ny fandraisana anjara.
« Tendrin’Andriamanitrano nahatonga azy ho lany tamin’ity fifidianana ity. Tsy dia nampoizin’ny maro loatra io vokatra io ka na izaho aza dia sadaikatra ihany nanoloana izany », hoy izy. Na izany aza dia mahatsiaro manana adidy amin’ny fampandrosoana ny Oniversiten’i Mahajanga ny tenany, na dia mbola betsaka aza ny olana hatrehana. Izy rahateo isan’ny mpianatra andiany voalohany tao amin’ny Sampam-pianarana mitsabo nify, ny taona 1977. Ary rehefa nahavita ny fianarany izy dia nanohy fihofanana tany ivelany ary nahazo ny anaram-boninahitra Professeur agréger, tamin’ity taona ity.
Ny firaisankinan’ny rehetra no tena tanjona, hoy izy, ka aoka hajanona ny fisaratsarahana. Efa mpikambana tao amin’ny Filankevi-pitantanana izy nandritra ny enin-taona ary efa Talen’ny IOSTM ny taona 2002-2005, 2005-2008. Ireo rehetra ireo no naharesy lahatra azy hizara ny traikefany amin’ny Oniversite.